Beelaan Ummani Du’aa Nyaata Export Ta’a - Caboowanci.com-Oromia
Posted on : July 10, 2017 By Nadhani
Biyya Oromia fi akkasumas akka waliigalataatti biyyaa Ethiopia keessati yeroo ammaa kanaa beelaa hamaa dhaan Ummanii lakkoofissi isaa milliyyona 8 amma milliyyona 10 ta’uutu midhaan nyaata dhabee du’aa jira. Beelaan Ummanii otuu du’aa jiruu nyaata export ykn biyya alaati ergamaa jira. Mootummaan Wayyanee qalbiin isaafii xiyyeefannoon isaa naannoo tokkoo ykn nannoo isaan keessaa bahani irrati diinagiddeedhaan ijaaaranii jiraachuun isaanii beekamadhaa. Kan naannoo biraa caraa argameen waan qaban irraa samanii jiraati nannoo biraa ajjeessa jiru.
Mootummaan abbaa irree wayyanee gara jabinaan ummata bifa adda addaatin giddirsuu erga jalqabee bara dheera lakkoofisifatee jira. Bara baraan Ummanni kun, kaan ni ajjeefama, kan mana hidhaati guuramaa, kaan biyyaa baqatee baha, kaan moo qabeenyii isaa saamamee lafitii issaa irraa fudhatamee maraatee waan nyaatu dhabee achumati du’a. Seerii mirga Ummata kanaa eguu tokko illee hin jiru. Seerrii mirga nyaatanii jiraachuun dirqama mootummaa ta’uu isaaf itti gaafatumaan isaa karaa seeraatin tokko illee hin jiru. Mootummaa tokko ummata isaa midhaan nyaataatin ofi danda’ee jiraachuun hojii isa salphaa fi gad bu’aa tokko ta’uun isaa ni beekama. Garuu mootummaan wayyanee dirqama isaafi itti gaafatamummaa isaa bahaa akka hin jirree beekamadhuma.
Mootummaan wayyaanee yeroo adda addaa otuu ummanni milliyyoonan lakka’aman beelaan du’aa jiranuu midhaan nyaataa kan akka Qamadii, Baqooloo, Buna, Xaafii , Damma, Fooni, Salixxii, Boloqee fi Ruzii Toonii milliyyoona heedduun lakkaawwammu biyyaa alaatti ergaa jira. Wagaa darbee mootummaan wayyaanee Buna biyya alaati ergitee qofa irraa poundi milliyyoona 467,000,000 olituu Buna qofa erga galiin argamee. Boqoolloo, Fooni fi Xaafii ykn Bideena irraa moo gara USD billiyyoona 2.3 olituu galii ta’aa jira. Egaa kun hundaa otuu biyyaa keessati Ummanni millioyyona hedduun lakkaawwaman beelaan du’aa jiranu biyya isa alaa quufan badhaasaa jiru mootummaan mafia.
Oromia fi Ethiopia naannoo adda addaa keessati Ummaniifi beeladdoonni Bishaan qulquluu dhabamee nyaanii dhabamuudhaan kan ka’ee wagaa wagaadhaan lubuun namaafi lubuun horii meeqaa meeqatu du’aa jira. Kana hundaa Mootummoonni qaroomanii otuu ummanii waan nyaatuu dhabee du’aa jirannuu nyaa biyya Ethiopia irraa biyya biraati export ta’aa jiru kana akka harkatti didani waamii keenya dabarfanna.
Nadhani	News Reporter
Open Letter to Darmstadt City Administrations